မြို့ဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း IDP စခန်းရှိ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် နို့တိုက်မိခင်များအား ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရကဏ္ဍပညာပေးခြင်း - MHAA | Myanmar Health Assistant Association
ပဋိပက္ခတွေနဲ့ အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ ပြည်သူတွေရင်ဆိုင်ကြရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေအနက်ကနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေအနေနဲ့ ရရှိဖို့ထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေ၊ ကလေးငယ်တွေဟာ အာဟာရချို့တဲ့နိုင်ခြေ အလွန်များနေပြီး နေ့စဉ် အာဟာရပြည့်ဝသော အမျိုးအစားစုံလင်တဲ့ စားစရာများကို သင့်တင့်မျှတအောင်စားသုံးခွင့် မရရှိကြတဲ့အတွက် အဏုအာဟာရဓာတ် ချို့တဲ့မှုနှင့်သွေးအားနည်းရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေ များပါတယ်။
လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ စစ်ပွဲတွေကနေဘေးလွတ်ရာရှောင်တိမ်းရင်း လူအများစုဟာ မြို့အစွန်အဖျားနေရာတွေမှာရှိတဲ့ ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ရေးစခန်း (IDPs) တွေနဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာ အကာအကွယ်ယူပြီး နေထိုင်ကြရပါတယ်။ ပေါက်တောပြင်ရွာအနီးရှိ မြို့ဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း IDP စခန်းက အမျိုးသမီးတွေဟာ သွေးအားနည်းရောဂါ ကာကွယ်တားဆီးရေးကို အလေးပေးဆွေးနွေးတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အာဟာရကဏ္ဍဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲကို ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ရန်ပုံငွေအထောက်အပံ့ဖြင့် ယူနီဆက်မြန်မာနဲ့ ဒေသခံမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း (MHAA) တို့ရဲ့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အစီအစဉ်မှ ပံ့ပိုးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး သားဦးကိုယ်ဝန်ဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်လေးလရှိ အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် ဒေါ်လှယိင်းက စိတ်အားထက်သန်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နေပါတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားနေသူ မိခင်လောင်းက “ကျွန်မရွာက မလုံခြုံဘူးလို့ ခံစားရလို့ ကျွန်မ ဒီစခန်းမှာ လာနေတာ ခြောက်လကျော်ပါပြီ။ ဒီနေ့မတိုင်ခင်အထိ ကျွန်မတစ်ခါမှ ကျန်းမာရေးပညာပေးဆွေးနွေးပွဲမျိုး မတက်ခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်မကလေးရဲ့ အကျိုးအတွက်ရော ကျွန်မကိုယ်တိုင်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ ကျွန်မခန္ဓာကိုယ်က အာဟာရဓာတ်တွေ ရဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို ကျွန်မမသိခဲ့ပါဘူး” လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရရဲ့ ငွေကြေးလှူဒါန်းမှုဖြင့် ယူနီဆက်နဲ့ MHAA တို့ လက်တွဲပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်ကျော်ကစလို့ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ အသက် ခြောက်လအောက် ကလေးငယ်ရှိ နို့တိုက်မိခင်တွေကို အဏုအာဟာရဓာတ်မျိုးစုံပါဝင်တဲ့ အပိုဆောင်း အာဟာရတွေကို ဝေပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်က ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းပြီး ရပ်ရွာအသိုက်အဝန်းအတွင်းက ရှေ့တန်းကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ လုပ်အားပေးတွေကတစ်ဆင့် ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိတဲ့ မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့အခြေခံကျန်းမာရေးနဲ့ အာဟာရပံ့ပိုးမှု အစီအစဉ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
MHAA က မြို့ဦး IDP စခန်းမှာ အာဟာရကဏ္ဍတွေကို ဆွေးနွေးပြောပြပြီး မိခင်တွေကို အဏုအာဟာရဓာတ် မျိုးစုံပါဝင်တဲ့ ဖြည့်စွက်ဆေးပြားသောက်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ အထူးသဖြင့် နေ့စဉ်ရရှိတဲ့ ရိက္ခာနည်းပါးပြီး မမျှတတဲ့အချိန်မျိုးမှာ ဒီဆေးပြားတွေက ပေးနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။ မိခင်တွေ အုပ်စုလိုက်စုပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်း အဏုအာဟာရဓာတ်မျိုးစုံပါ အပိုဆောင်းအာဟာရဆေးကို တစ်နေ့တစ်လုံးသောက်ရခြင်း အကြောင်းရင်းတွေနဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေစတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီဆေးတွေက ကျန်းမာတဲ့ကလေးငယ်အဖြစ် ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့၊ မိခင်နဲ့ ကလေးမှာ သွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့နဲ့ အလွယ်တကူ မီးဖွားနိုင်ဖို့ စတာတွေမှာ အထောက်အကူပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ အဏုအာဟာရဓာတ်ဆေးပြားတွေကို ဝေပေးတဲ့အခါမှာ အမျိုးသမီးတွေက ဒီသတင်းကို တခြားသူတွေကို ဖြန့်ဝေပေးဖို့ စိတ်အားထက်သန်ခဲ့ကြပါတယ်။ မီးမဖွားမီပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး (Antenatal Care) ဝန်ဆောင်မှုမှ ပိုပြီးကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထောက်ပံ့ပေးလာနိုင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေက အာဟာရကဏ္ဍဆွေးနွေးပွဲတွေကို တက်ရောက်လာကြပြီး အဏုအာဟာရ ဖြည့်စွက်ဆေးတွေကို ပုံမှန်သောက်သုံးကြတဲ့အတွက် ထိရောက်တယ်လို့ ယူဆရမှာပါ။
ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရရဲ့ ရက်ရောလှတဲ့ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနဲ့အတူ ယူနီဆက်နဲ့ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေက ရခိုင်ပြည်နယ်က အခြေအနေတွေကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပြီး မိခင်နဲ့ကလေးအားလုံး ယခုပံ့ပိုးမှုတွေကနေ အကောင်းဆုံး အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေနိုင်အောင် အခြေခံကျန်းမာရေးနဲ့ အာဟာရပံ့ပိုးမှု အရည်အသွေးအပြင် လက်လှမ်းမီရရှိနိုင်မှုတို့ တိုးတက်လာအောင် ဆက်လက် ထောက်ခံစည်းရုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်?
Story in ENGLISH https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/taa/1.5/16/1f449.png");">? https://uni.cf/3erQKji